बैंक वित्तीय संस्थाको सेवामा गुनासो छ ? यसरी गर्नुस् उजुरी « Drishti News – Nepalese News Portal
काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएका सेवाप्रति तपाईको कुनै प्रकारको गुनासो छ रु या उनीहरुले दिएको सेवामा कुनै जटिलता पैदा भएको छ ? यदि छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सेवा सुरु गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले गुनासो डट एनआरबी डट ओआरजी डट एनपीमार्फत सो सेवा शुरु गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं । साताको कारोवारको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ ।
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ निष्काशन स्थगित भएको छ
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले विभिन्न खातामा दुर्घटना र गम्भिर रोग विरुद्घ प्रदान गरिने विमा दावी